EPL – Myanmar Sports United
Myanmar Sports United
ရော်နယ်ဒိုကို လီဝန်ဒေါစကီးနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ လီဝန်ဒေါစကီး ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့နေရာအစားထိုးဖို့ ရော်နယ်ဒိုကို ပစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။လီဝန်ဒေါစကီးဟာ အခုနွေရာသီမှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကနေ ထွက်ခွာပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့် စာချုပ်တစ်နှစ်ကျန်တဲ့သူ့ကို အသင်းက လက်မလွှတ်ချင်ပဲဖြစ်နေပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် …
June 25, 2022 By admin2EPL
ယူနိုက်တတ်မှာလစ်လပ်နေတဲ့ သူလိုချင်တဲ့ကျောနံပါတ်ကိုကြိုပြောထားတဲ့ ဒီဂျောင်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းသို့ ဖရန်ကီဒီ‌ဂျောင် ဟာ ပြောင်း ရွှေ့ ကစားရန် မီးစိမ်းပြ ပီးတဲ့ နောက်မှာ တော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းတို့ ကြားမှာပြောင်း ရွှေ့ ကြေးနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးမှု …
June 19, 2022 By admin2EPL
ယူနိုက်တတ်ရဲ့ စီနီယာကစားသမားတွေဆီ အီးမေးလ်ပို့ပြီး တန်းဟတ် သတိပေး
မန်ယူနည်းပြသစ်တန်းဟတ်ဟာ ကစားသမားတွေဆီကနေ သူ ဘာတွေမျှော်လင့်ထားတယ်၊ သူ လိုချင်တဲ့အသင်းပုံစံနဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကို အီးမေးလ်ပို့ပြီး အသိပေးလိုက်တယ်လို့ The Sun သတင်းစာက ဖေါ်ပြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အေဂျက်ဇ်နည်းပြဟောင်းဟာ ဖာဂူဆန်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်း မှန်ကန်မှုမရှိတော့တဲ့အသင်းယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်းလဲချင်နေတာပါ။ “ ဘောလုံးဆိုတာ …
June 12, 2022 By admin2EPL
ယူနိုက်တတ်တို့ တရားဝင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ လာဇီယို ကွင်းလယ် ကစားသမား မီလင်ကိုဗစ် ဆာဗစ်
အီတလီ စူပါအေးဂျင့် ရော်ဘတ်တို ဒေ ဖန်တီကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းသည် လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက် အတွက် အင်အားဖြည့်တင်းမှုတရပ်အနေနဲ့ လာဇီယို ကွင်းလယ် ကစားသမား မီလင်ကိုဗစ် ဆာဗစ်ကို ခေါ်ယူဘို့. …
June 4, 2022 By admin2EPL
ချဲလ်ဆီးကစားသမား ကန်တေကို ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ ယူနိုက်တတ်
ယခုအပတ်အတွင်း အန်ဂိုလို ကန်တေနဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွေ့ သတင်းတွေ က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဂါးဒီးယန်း သတင်းဌာနရဲ့ေ ဖ်ာပြချက်အရ ယူနိုက်တက်က ပြင်သစ်ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုကမ်းလှမ်းဖိြု့ ပင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကန်တေကို …
June 1, 2022 By admin2EPL
ပရီးယားမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံးရာသီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီး ယာယီနည်းပြရန်းနက်ရဲ့မှတ်ချက်ကြောင့် ယူနိုက်တတ်အသင်းသားတွေကြား စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေရှိနေ
ယာယီနည်းပြရန်းနစ်ခ်ရဲ့ မှတ်ချက်ကြောင့် မန်ယူအသင်းသားတွေကြားမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။ သရဲနီတွေဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အဆိုးရွားဆုံးရာသီနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ၅၈ မှတ်နဲ့ အဆင့် ၆ နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ရသလို ချန်ပီယံမန်စီးတီးနဲ့ ၃၅ မှတ်အထိပြတ်ကျန်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ရော်နယ်ဒို၊ အသင်းခေါင်းဆောင်မက်ဂွိုင်းယား၊ …
May 25, 2022 By admin2EPL
လာမယ့်ရာသီမှာ ရော်နယ်ဒို ယူနိုက်တတ်မှာ ရှိမရှိ ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဖာဒီနန်
ယူနိုက်တက်ဂန္တဝင်နောက်ခံလူဟောင်း ရီယိုဖာဒီနန်က လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမှာ ရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့ ယူနိုက်တက်မှာ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် ဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ ယူနိုက်တက်နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း တနှစ်ကျန်ရှိသေးတဲ့ ကစားသမားပါ။လာမယ့်ရာသီမှာ ရော်နယ်ဒိုတယောက် အသင်းမှာဆက်ရှိ၊ မရှိ အားလုံးက …
May 17, 2022 By admin2EPL
ဟာလန်း ကိုခေါ်လိုက်ခြင်းဟာ မန်စီးတီးအသင်းပိုပြီး တောင့်တင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ ကလော့ပ်
လီဗာပူး နညျးပွ ယာဂငျကလော့ပျက ဟာလနျးကို ခြီးကြူးပွီး သူ့ကိုချေါလိုကျတဲ့ မနျစီးတီးက ပိုမို တောငျ့တငျးသှားပွီလို့ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ မနျစီးတီးဟာ ဟာလနျးအတှကျ ဒေါ့မှနျနဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါပွီ။ ကစားသမားနဲ့ အသေးစိတျကိစ်စရပျတှေ ဆှေးနှေးဖို့သာ ကနျြတော့တယျလို့လညျး မနကေ့ တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။ …
May 11, 2022 By admin2EPL
ဘင်ဖီကာအသင်းမှ ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှူး ဒါဝင်နူးနက် ကို ခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့ ယူနိုက်တတ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း သည် ဘင်ဖီကာအသင်းမှ ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှူး ဒါဝင်နူးနက်ကို ကင်းထောက်တွေစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားပြီး နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ျေစးကွက်မှာခေါ်ယူဘို့. ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရဘာတယ် ။ နူးညက်ဟာ ဒီရာသီမှာဘင်ဖီကာအတွက်လဲ ပြိုင်ပွဲစုံ ၃၄ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ဖော်လန်ရဲ့ …
May 6, 2022 By admin2EPL
ယူနိုက်တတ်ကို ရော်နယ်ဒိုရောက်လာခဲ့ခြင်းအပေါ် သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ကာဗာနီ
ယူနိုက်တတ်ကို ရော်နယ်ဒိုရောက်လာခဲ့ခြင်းအပေါ် သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ကာဗာနီ ခရစ္စတီယာနို ‌ရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတာ ကြိုသိခဲ့ပါက သူ့အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို စွန့်ခွာခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုက နွေရာသီအပြောင်းအရွေ့ နောက်ဆုံးရက်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ထံ အံ့အားသင့်ဖွယ် ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့် …
Page 1 Page2… Page 144
© Myanmar Sports United 2022 Myanmar Sports United2022 • Themaga powered by WordPress